Nzira Dzekuverenga Bhaibheri: Verenga Uchibva Kwarinotangira, Uchibata Nyaya Dzakaitika Kare
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Azerbaijani Bulgarian Catalan Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish Fon French Georgian German Greek Greenlandic Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Umbundu Uzbek Vietnamese Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Nzira Dzekuverenga Bhaibheri
Bhaibheri rine mazano anobatsira pakurarama. Kana ukariverenga nekufungisisa zuva nezuva uye ukashandisa zvaunodzidza, ‘nzira yako ichabudirira.’ (Joshua 1:8; Pisarema 1:1-3) Uchaziva Mwari neMwanakomana wake, Jesu, uye zivo iyoyo ichaita kuti uponeswe.​—Johani 17:3.
Unofanira kuverenga sei Bhaibheri? Pane nzira dzakawanda. Purogiramu ino yekuverenga Bhaibheri inokubatsira kuti uverenge Bhaibheri kubvira kwarinotangira kana kuti uverenge zvichienderana nenyaya dzaunenge uchida. Semuenzaniso, unogona kuverenga zvikamu zvinotaura nezvenhoroondo yaMwari nevaIsraeri. Unogonawo kuverenga zvikamu zvinotaura nezvekuti ungano yekutanga yechiKristu yakatanga sei kuzosvikira ikure. Kana ukaverenga zvitsauko zvakati kuti zuva rega rega, panozopera gore unenge waverenga Bhaibheri rese.
Ungave uri kuda kuverenga Bhaibheri zuva rega rega, kuronga kuriverenga kwegore rese kana kuti uchidawo kuverenga Bhaibheri kekutanga, purogiramu ino ichakubatsira. Dhaunirodha purogiramu ino yekuverenga Bhaibheri, ubve watanga kuriverenga nhasi chaiye.
Zvinhu 5 zvaungaita kuti unakidzwe nekuverenga Bhaibheri.